Inona no azonao atao mahandro amin'ny arina arina? - Mahandro aho
Inona no azonao atao mahandro amin'ny arina arina?
Inona no azonao atao mahandro amin'ny arina?
Inona no ataonao amin'ny arina arina rehefa vita?
Ratsy ho anao ve ny mahandro amin'ny arina arina?
Afaka mahandro hena mivantana amin'ny saribao ve ianao?
Mandra-pahoviana no avelanao hirehitra arina alohan'ny handrahoana?
Manidy ny sarony ve aho aorian'ny fandrehitra arina?
Mandra-pahoviana ny grill charbon dia hijanona hafanana?
Mivoaka irery ve ny fanabeazana saribao?
Azonao atao ve ny mamoaka arina amin'ny rano?
Iza no azo antoka solika na arina arina arina?
Tsara kokoa ve ny mahandro amin'ny hazo na arina?
Tsara kokoa noho ny gazy ve ny saribao?
Manidy ny grill ve ianao rehefa mahandro steak?
Ahoana no fahandroako steak amin'ny grill arina?
Ahoana no fahandroanao hena amin'ny vilan'ny arina?
Avelao hahatratra hafanana avo (mafana fotsy) ny saribao mba ho mora masaka sy hadio ny sakafo. Andramo mahandro hena isan-karazany toy ny mason'ny taolan-tehezana, henan-kisoa, henan'ondry ary maro hafa! Mihinana ny varinao avy amin'ny afo! Atsipy ny voatavo, voatavo, zucchinis ary bebe kokoa amin'ny arina ho an'ny lovia legioma mifoka!
Fongory io. Akatona ny fonony ary apetaho amin'ny vilan'ny arina mandritra ny 48 ora mandra-pahatongan'ny mangatsiaka tanteraka ny lavenona.
Fonosy amin'ny foil. Ho an'ireo brikety arina misy additives na tsy hazo dia ario izy. …
Madio sy mifehy. …
Ahena ny fofona. …
Zezika io. …
Ataovy maharitra ny voninkazo.
Amin'ny ambaratonga fototra indrindra, ny tsiro mifoka sy ny char azonao avy amin'ny steak voaendy tsara dia tsy dia tsara loatra ho anao. Rehefa miraraka amin'ny vainafo mafana ny tavy avy amin'ny hena mahandro, ny setroka mamorona dia misy zavatra antsoina hoe hydrocarbons aromatika polycyclic (PAH).
MAHALALA IZAO: Tsy maintsy manalefaka sakafo ve ianao alohan'ny handrahoina?
Ny steaks lehibe sy kely dia mipoitra tsara rehefa voatono mivantana amin'ny saribao mafana. Ny steaks lehibe sy kely dia mipoitra tsara rehefa voatono mivantana amin'ny saribao mafana. Tim Byres, evanjelistra momba ny fandrahoana sakafo mivantana tao amin'ny trano fisakafoany Smoke, dia nampahafantatra an'i Matt Lee sy Ted Lee ny teknika tamin'ity taona ity.
AZA: hadino ny manafana ny grill alohan'ny hanombohana mahandro.
Vantany vao zaraina ao anaty vilaninao ny arinao, atsipazo eo amboniny ny sarony ary avelao hipetraka mandritra ny dimy ka hatramin'ny 10 minitra alohan'ny hametrahana sakafo eo ambonin'ny arina, dia te handre feon-tsofina kely ianao rehefa mikapoka ny grates ny proteinina, voankazo na legioma.
TOKONY HANOKATRAO NA HANATONDRANA NY LIDIN'NY VONDRAKO REHEFA MANOMBOKA CHARCOAL? Tokony hisokatra ny sarony raha mandamina sy mandrehitra ny arina arina ianao. Raha vao mirehitra tsara ny arina dia akatona ny sarony. Ny ankamaroan'ny grill arina dia mafana kokoa aorian'ny jiro.
Anisan'izany ny rivotra, ny mari-pana ivelany, ny hatevin'ny rindrinao / mpifoka sigara, ary ny karazan-tsolika ampiasainao. Ny brikety arina dia matetika novolavolaina handoro mandritra ny adiny 1 eo amin'ny maripana tsy miova, izay mazàna mafana kokoa noho ny mari-pana mifoka.
Ny saribao dia hitohy mandoro mandra-pahafatiny tanteraka raha tsy hoe mamono azy ianao.
Atsipazo - Mba hanafainganana ny zavatra dia azonao atao ny manaparitaka arina amin'ny rano alohan'ny itondranao ny afo. Maty an-drano izy ireo - Amin'ny alàlan'ny fandrarahana rano amin'ny arina sy ny fikorontanana, dia azonao atao ny manala ny lavenona haingana sy feno, manala ny mety hisian'ny afon'afo tsy miverina mandrehitra.
MAHALALA IZAO: Ahoana no fahandroanao basil vaovao?
Fa rehefa manontany ireo manam-pahaizana momba ny fahasalamana ianao dia mazava ny valiny: ny fanorana gazy na ny propane na ny gazy voajanahary dia mahasalama kokoa noho ny arina ho an'ny vatanao sy ny tontolo iainana. "Aleo mitoto amin'ny lasantsy satria mora kokoa ny mifehy ny mari-pana," hoy i Schneider.
Raha ampitahaina amin'ny arina dia manome tsiro tsara kokoa ny kitay mahandro. … Na izany aza, hanaiky ny ankamaroan'ny olona fa matsiro kokoa ny sakafo natsatsika raha ny fandrahoana kitay no ampiasaina ho solika fa tsy brikety na arina mihombo. Rehefa mirehitra ny kitay mahandro dia hamoaka setroka manafotra izay tototry ny sakafonao.
Siansa fotsiny io. Nianiana ny vahoaka saribao fa ny fomban'izy ireo dia manome karazana tsiro majika amin'ny sakafony.
Raha mitono sakafo mahandro haingana toa ny burger ianao, steak manify, hena, trondro, makamba, na legioma voadidy mivantana ao anaty afo dia azonao avela tsy hisokatra ny grill. … Fa rehefa mandrehitra steaks matevina kokoa ianao, akoho amam-borona, na akoho manontolo dia tadiavinao hidina ny sarony, indrindra rehefa mahandro amin'ny hafanana ankolaka ianao.
Atsangano amin'ny faritra mafana ny araranao ho an'ny fanafanana mivantana sy faritra hafanana antonony ho an'ny hafanana ankolaka. Te hampiasa ny roa amin'ny fandrahoana ny steak ianao. Apetaho eo amin'ny faritra mafana ny steak ary avelao izy ireo hipetraka mandritra ny roa minitra, avy eo omeo ny ampahefatry ny ampahefatry.
Raha vantany vao ritra ny arinao, ario ny setroky ny arina ary apetaho amin'ny vilaninao ny masaka fahandroanao.
Avelao hafanaina ny vilaninao - tianao ho 500 ° F farafaharatsiny izy ireo.
Apetaho eo amin'ny grillanao ny steak ary apetaho indray ny sarony.
Aorian'ny roa minitra dia ahodina ny steaks 90 °; izany dia hanome anao marika fikarohana tonga lafatra.
MAHALALA IZAO: Azoko atao ve ny mandrotsaka amin'ny fatana?
Valiny tsara indrindra: azo ampiasaina hanalefahana anana ve ny vovon-davenona?
Valiny haingana: Ahoana no mahandro sy mihinana ampemby?
Ahoana no fahandroanao basil vaovao?
Voasaronao amin'ny foil ny tratran'ny vorontsilaza rehefa mahandro?
Inona ny mari-pana endasinao lalina ny vorontsiloza?
Maharitra hafiriana ny fahandroana fisaka brisket?
Ahoana no hitehirizanao ny ovy mamy tsy ho lasa volontany aorian'ny fandrahoana?